Capricorn akara akara aka Igbu egbugbu
Capricorn akara akara aka
Sergio Gallego | | Ogbugbu
Enwere ọtụtụ ndị kwenyere na ihe niile gbara gburugburu na akara akara nke zodiac. Ihe ịrịba ama ndị a na-enyekarị ihe ọmụma banyere àgwà mmadụ dị ka ụbọchị ọmụmụ si dị. Nke a emeela ka ọtụtụ ndị họrọ iji akara ha kpuchiri egbugbu na akpụkpọ ahụ ha.
Otu akara zodiac dị otú ahụ bụ Capricorn.. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nke ọnụ ọgụgụ nke ewu ewu na-anọchi anya ya, egbugbu na-abụkarị ihe na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ adọrọ.
1 Ihe ịrịba ama nke Capricorn
2 Capricorn akara akara aka
3 Capricorn àgwà metụtara tattoos
Ihe ịrịba ama nke Capricorn
Dabere na horoscope, akara ngosi Capricorn kwụsiri ike ma dịkwa jụụ. N'ụzọ nke a, ndị amụrụ n’okpuru ihe ịrịba ama a bụ ndị na-arụsi ọrụ ike, ndị nwere ọrụ, ndị na-enye ọzụzụ na ndị bara uru. N'ihi na ha na-adịgide adịgide ma na-anọgidesi ike, ha na-aghọ nnukwu ndị ọkachamara. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha bụ ndị na-achọsi ike, ndị siri ike na ndị na-ahụ ọdịnihu dị oke oji.
Ihe ịrịba ama a na-ese onyinyo oke ewu na ọdụ azụ. Ọ bụ ihe ịrịba ama ụwa nke na-akwado ndị ahụ amụrụ n'etiti Disemba 22 na Jenụwarị 19. Dịka anyị kwurula n'elu, egbu egbu Capricorn na-enye ohere imepụta ihe mara mma nke zuru oke ma a bịa n'igosi ya.
Dị ka ọ dị, egbugbu a nwere ihe oyiyi nke ewu ahụ na ọdụ nke azụ. Nhazi ahụ nwere ike ibu ma na-adọrọ mmasị. N'oge ndị ọzọ, akara ngosi a na-esonyere ụyọkọ kpakpando nke ya, ọ bụ ezie na ịnwekwara ike ịhọrọ atụmatụ minimalist.
Capricorn àgwà metụtara tattoos
Enwekwara ndị mmadụ ga - enweta ụdị egbugbu dị iche iche metụtara omume nke akara Capricorn:
Ndị mmadụ Capricorn ha bụ ndị hụrụ egwu n'anya ma na-egosi oke nghọta maka uru ikpe ziri ezi bara. Ọ bụ ya mere e ji nwee akara aka Capricorn nke jikọtara ya na ngwa egwu ma ọ bụ site na onyonyo nke ikpe ziri ezi.
Ihe ọzọ e ji mara ndị Capricorn bụ na ha hụrụ ibe ha n'anya ma ha raara onwe ha nye na nmekorita nile. Ọ bụ ya mere akara aka nke Capricorn nwere ike ịka egbugbu n'akụkụ ihe osise nke onye a hụrụ n'anya.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọ ghọọla ihe a ma ama iji gosipụta ihe ịrịba ama a na-ekwu maka ya na akpụkpọ ahụ., na nke a Capricorn na-esote kpakpando nke ya nwe. Ihe dị mma banyere ụdị aghụghọ ndị a bụ na ha na-ahụ nke ọma ma na-adọta ọtụtụ elebara anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Capricorn akara akara aka
Tatoo Spiderman, onye ududo, enyi kacha mma
Akpaaka na-enweghị njedebe, na-enye nhazi a!